Suuraalee filatamoo Afriikaa torban kanaa: Guraadhala 2- 8, 2018 - BBC News Afaan Oromoo
Suuraalee filatamoo Afriikaa torban kanaa: Guraadhala 2- 8, 2018
Suuraalee Afriikaa guutuu ardittiifi addunyaa gutuu irraa filataman kan torban kanaa.
Shamarreewwan lama gara qophii seimannaa barattootaatti wayita deemaa jiran, Dimokraatawa Riippablika Kongootti...
Barattoonni yunivarsitii haaraan hundinuu gara bara haaraa jalqabaatti seenaa jiru.
Fakkii artistii lammii Naayijeeriyaatiin hojatameef baduun Mana ammayaahaa Landanitti argamees calbaasiin hanga Poundii kuma 300 (doolaara kuma 417tti) gurguramuufi.
Guyyaa Kamisaa, mormitoonni dhiibba hedduu ta'an fuuldura Embaasii Ruwaandaa Israa'eel magaalaa Heerziliyaa keessatti argamutti walitti qabamuun seera biyyattii afrikaanota irratti xiyyeefate fakkaatu irratti mormii dhaggeesisaniiru.
Gaazexessitoonni NTV isitudiyoo isaanii Keeniyaa irraa tamsaasanis guyyaa Kibxataa akka KNT News waliin deebii'ee tamsaasa eegaluuf taasifameetti. Tamsaasni sadaffaa 'Citizen TV ammalleen hindeebiifamne. Sadan isaan iyyuu sirna 'waadaa galmiinsaa' ogganaa paartii mormitootaa Raayilaa Odiingaa 'akka pirezidaantii ummataatti' waan gabaasaniif cufamanii turan.
Guyyaadhuma walfakkaatuuttis, gareen miseensa dubartoota Naayijeeriyaa Seun Adiiguun, Ngoozii Onwumeere, Aku'omaa Omee'ogaa fi Simideelee Adee'agboo sirna simannaa Xaba Olompiika Gammaa Koriyaa Kibbaa irratti suuraa ka'an.
Guyyaa Sanbataa, waaqeefattoonni kabaja ayyaana Hinduutiif qophii taasisan, Afriikaa Kibbaa ollaa Darbaaniitti ...
Haaluma qaama sirna kabajaatiin , namoonni kabajichaaf ofi keennaniis qaama isaanii uruun ija mukaa fi daraaraa fannifachuun - dhiibbaa fakkeenyaan ibsuuf kana godhu.
Guyyaadhuma walfakkaatuun, Darbaanitti Raastaafariyaan reegee Ayyaana ofiisaanii kabajachuuf wayita bahaniitti
Guyyaadhuma Sanbataa, dowwattuun holqa dhiheenya kana kaayirootti argame tokko suuraa yoo kaafattu.
Guyyaa Wiixataa Afriikaa Kibbaatti deeggartoonni bulchaa paartii Raamfoosaa dhaadanno qabatanii wayita hiriiraaf bahanitti piresidaanti Jaaakoop Zuumaa taayitaa akka gadhiisanif waamicha taasisaniiru.
Jimaata ammoo naga eedgoonni Seenegaal Pirezidaantii Faransaayi Emaanu'e Maakroon Daakaar buffata xayyaaraatti oso eegaa jiranu ...
Sirbituu beekamtuu Rihaanaa fi Pirezidaantiin faransaayi lamaanuu yaa'ii barnootaa Magaalaa guddoo Senegaal irratti hirmaataniiru.
Daandiidhuma tokkoo irraa, hojattoota albudaa 900 olii sababii badiinsa ibsaatiin lafa jalatti qabamanii turan wayita baraaramanitti foddaa konkolaataa keessaan harka baasee nagaa wayita dhaamu.
Guyyaa Jimaataatti, eegdduun mana hidhaa magaalaa Morookkoo Kaasaablaankaa dura.
Adurreen badee ture waggaa 11 booda warrasaatti deebi’e
Masriin Ayivoorii Koost, Ikuwaatoriyaal Giiniin ammoo Maalii rukuttaa peenaalitiin injifatan